Dowladaha ku bohoobey IGAD oo war ka soo saaray heshiiska Somalia & Kenya. – Puntlandtimes Hoyga Wararka Somalia
Dowladaha ku bohoobey IGAD oo war ka soo saaray heshiiska Somalia & Kenya.
June 25, 2021 Xuseen 1
Wadamada ku bohoobey urur goboleedka IGAD ayaa waxa ay xalay Kulankoodii 72-aad ku yeesheen Aaladda Muuqaalka Wada-sheekeysiga ee Video Conference, iyadoona uu shir guddoominayey wasiirka arrimaha dibadda ee wadanka Sudan, ahna Madaxa Golaha Wasiiradda ee IGAD, Maryama Al-Saadiq Al-Mahdi.
Kulankaasi ka dhacay Aaladda Fogaan Araga waxaa ka qeyb galay Wasiiradda Arrimaha Dibedda ee Dalalka Somalia, Jabuuti, Uganda iyo South Sudan, Wasiiru-dowlaha Arrimaha Dibedda Ethiopia iyo Xoghayaha Maamulka Guud ee Wasaaradda Arrimaha Dibedda Kenya.
Shirkaan ayaa waxaa looga hadlay Dhacdooyinkii ugu dambeeyey ee dalalka xubnaha ka ah Urur-gobaleedka IGAD, gaar ahaan Arrimaha Somalia, South Sudan, Khatarta COVID 19 iyo Doorashooyinkii ka kala dhacay abuuti, Uganda iyo Ethiopia.
Wasiirka arrimaha dibadda Sudan ahna madaxa Golaha Wasiiradda ee Urur-gobaleedka IGAD, , Maryama Al-Saadiq Al-Mahdi oo Kulankaasi ka hadashay waxay soo hadal-qaaday dadaalka Nabadda ee dalalka Somalia iyo South Sudan iyo Soo-celinta Xiriirka Diplomaasiyadeed ee Somalia iyo Kenya.
Xoghayaha fulinta ee Ururka IGAD, Dr. Workeneh Gebeyu oo ka hadlay Furitaanka Shirkaasi waxa uu ka warbixiyey dadaalka Nabadda ee dalalka Somalia iyo South Sudan, xal-u-helista Colaadaha, Qaxootiga iyo dadka Barakacayaasha iyo Khatarta Xanuunka COVID 19 ku hayo dadka ku nool Mandiqada.
Ugu dambeyntiina Workeneh ayaa sheegay in IGAD ay soo dhoweynayso heshiiska ay Dowladaha Somalia iyo Kenya ku gaareen inay dib u soo celiyaan Xiriirkooda Diplomaasiyadeed, isagoo dhanka kalena bogaadiyey Doorashooyinka Madaxtinimada ee ka dhacay dalalka Jabuuti iyo Uganda iyo Doorashadii Guud ee ka dhacday Ethiopia.
Ururkan IGAD marxaladdii lagu aasaasay, martabaddiisii, iyo casrigiisiiba hadda way wada idlaadeen oo ma aha mid munaasab ah. Kasokowna, maba ahayn urur loodhisay ujeeddada lagunisbeeyo oo dadka lagu marinhabaabiyo.
Wuxuu weligiiba ahaa isbahaysi waddamada Geeska iyo Bariga Afrika ee kristannimada xarumaha u ah si dadban la isugu gacansaaray ujeeddada ah inay kuwa muslimiinta ah sha’nigooda hoos udhigaan oo guudkana ka waarddiyeeyaan oo colaado kadhex oogaan – khaasatan dalalka hoyga u ah qowmiyadaha Soomaalida iyo kuwa ay bah-wadaagta yihiin iyo Suudaanta Carbeed.
Lama hayo mashaariic latabi karo ee lataaban karo oo uu ujeeddada qamaamudan ee looyagleelay waddamada Geeska Afrika kafuliyay intii uu jiray. Dabcan, xooluhu shilalka ay isdhigaan ayaa lagubireeyaa, ishiisa laga-arkaa ushiisa lala dhacaa. Waa ujeeddo salka kuhaysa qaddiyad 11 qarni lasoo duulinayay oo colaado ba’anna looguqaaday Soomaalida iyo Suudaanta Carbeed.
Dad aan katirsanahay ayaa waxaa yaab iyo amankaag ku noqday waxa aqoonyahannada iyo waxgaradka Soomaalida, inta bah-wadaagta ah la ah, iyo Suudaanta Carbeed ka daahay inay IGAD iyo dhagartiisaba kugacansayraan oo yeelaalaan isbahaysi qowmiyadahoodan walaalaha ah ee duullaanka lagusoo ahaa dhan walba iyo sikastaba umideynaya.